လိင်ပညာပေးခြင်းကို ဘယ်အချိန်မှာလုပ်သင့်လဲ။ဘာကြောင့်လုပ်သင့်လဲ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး » လိင်ပညာပေးခြင်းကို ဘယ်အချိန်မှာလုပ်သင့်လဲ။ဘာကြောင့်လုပ်သင့်လဲ
မိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာ လိင်အကြောင်းကို ရိုးရိုးသားသား၊ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုကြဖို့ဟာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ကလေးဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူလူပျို ၊ အပျို ဝင်တဲ့အချိန်မှာ လိင်အကြောင်းတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့ပိုပြီး အရေးကြီးပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ကလေးကို လိင်ပညာပေးအကြောင်းဘာလို့ပြောသင့်သလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာပြောသင့်သလဲဆိုတာတွေကိုအောက်တွင်ဖတ်၍လေ့လာလိုက်ပါ။
လိင်ပညာပေးအကြောင်းကို ကလေးကိုဘယ်အချိန်မှာ စပြောသင့်ပြီလဲ။
လေ့လာမှုတွေအရ မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးအများစုဟာ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်မှာ လူပျို ၊ အပျိုဖော်ဝင်လာကြပါတယ် ။ ဒါဟာသင့်ကလေးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းကို စပြီးပြောဖို့သင့်တော်တဲ့အချိန်ပါပဲ။မိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့ ရာသီလာတဲ့အကြောင်းတွေကို ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာသင်ကြားကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့သင့်ကိုမေးမြန်းလာတဲ့အခါ သို့မဟုတ် သူတို့ဟာသင့်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကို လိုနေပြီလို့ခံစားရတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံသင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ် ။ လိင်ပညာပေးခေါင်းစဉ်တွေမှာတော့ ခန္ဓာဗေဒ ၊ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ် ။သင့်ရဲ့ကလေးဟာ ဒီအကြောင်းတွေကိုကျောင်းမှာသင်ယူလာရျ့အခါမှာ နောက်ထပ်မေးစရာမေးခွန်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ် ။ဒါကြောင့်သင်ဟာ သူတို့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာကိုပြောခွင့်ပေးပြီး အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ရှာဖွေကြရပါမယ် ။
ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာတွေက ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်တော့ပါဘူး ။ဒါဟာ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ခေါင်းကိုက်စရာပြဿနာတစ်ခု အခုထိဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ လိင်ပညာပေးခြင်းကို စောစောစီးစီးနဲ့လုံလုံလောက်လောက်လုပ်ထားခြင်းဟာ ကးဆယ်ကျော်သက်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။ အောက်ပါအကြောင်းအရာတွေကတော့ သင့်ရဲ့ကလေးဟာ မေးခွန်းတွေမေးလာရင် ဘာကြောင့် မရှောင်လွှဲသင့်ဘူးလဲဆိုတာကို ရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်းဟာ ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေရုံသာမက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်း ၊ ကလေးမွေးရခြင်း ၊ စောင့်ရှောက်ရခြင်းတို့ကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်မိခင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ် ။
အပျော်အပါးလိုက်စားမှုမှ ရှောင်ကျဉ်ခြင်း ၊ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုပုံ ၊ ကိုယ်ဝန်တားခြင်းနည်းလမ်းတွေအကြောင်းကို ပညာပေးခြင်းဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ကိုယ်ဝန်ရခြင်းနဲ့လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်ရောဂါများမှကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။
ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဟာ သူတို့နဲ့သူတို့ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာဘယ်လောက်အထိသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့နားလည်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ် ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်းဟာ အနာဂါတ်မှာဆိုးကျိုးတွေမည်မျှရှိကြောင်းကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ် ။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းရဲ့ရလာဒ်တွေကအရမ်းအန္တရာယ်ရှိပါတယ် ။ဒါကြောင့် ကလေးတွေဟာကိုယ်ဝန်ရခြင်းအကြောင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်မရအောင် ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်ရမလဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။
လိင်ပညာပေးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ကလေးကို ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ နဲ့အခြားလိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်ရောဂါများဖြစ်သည့် ဆီးပူညောင်းကျရောဂါ ၊ ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း ၊ ဆီးခုံရောင်သောရောဂါများ နဲ့ကာလသားရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကလေးဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းကို သိချင်လာခြင်းဟာ ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကို နားလည်ခြင်းတွင်ပုံမှန်အဆင့်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။ လိင်ပညာပေးခြင်းဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းကို ပိုပြီးအကောင်းမြင်စေသလို လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းကိုလည်း နားလည်စေပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ကလေးကိုသူတို့သိချင်တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခြင်းဟာ သူတို့ကြီးလာတဲ့အခါအန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူတွေကနေ ကာကွယ်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။သူတို့ဟာ ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသင်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးလာရတဲ့အခါမှာ သူတို့ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာများဖြစ်သည့် ရည်းစားပြသနာများ ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ၊ ကျောင်းတွင်အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်း ၊ အရက်စွဲနေခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုသင့်ကိုပိုပြီးပြောပြလာပါလိမ့်မယ် ။
Hello health group သည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း ၊ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ပေးပါ ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝငျဘာ 5, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝငျဘာ 5, 2018
Comprehensive Sex Education: Research and Results.
http://www.advocatesforyouth.org/publications/1487. Accessed January 2, 2017.
Sex Education for Children: Why Parents Should Talk to their Kids About Sex.
အလုပ်များတဲ့ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတွေအတွက် လက်မောင်းတွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း